13 Iikholeji zoLuntu eziBalaseleyo eCarlifonia 2022
Septemba 24, 2021 Eze uThadayo
I-13 yeeKholeji zoLuntu ezigqibeleleyo eCalifornia
Ezona kholeji zoluntu zibalaseleyo eCarlifonia zichaziwe zaza zaxoxwa kweli nqaku ukuququzelela ukwamkelwa kwabo banomdla wokuya kwikholeji yaseCalifornia.
ICalifornia lilizwe lesithathu ngobukhulu e-United States elinabantu abaqikelelwa kwizigidi ezingama-38 ke ilizwe elinamandla elinonxweme oluhle, iintaba, amahlathi, kunye nezinye iindawo eziphawuliweyo. Eli lizwe lihlala eLos Angeles - isihlalo seHollywood - iSan Francisco kunye nezinye izixeko kunye neziqithi. Zonke ezi zinto zenza iCalifornia indawo enomdla wokuya kufunda kuyo, uya kudibana nabantu abahlukeneyo, kwaye wandise amava akho ngokulinganayo.
Ezinye zeeyunivesithi kunye neekholeji ezikumgangatho ophakathi kwelona lizwe liphezulu laseMelika nakwilizwe lonke bakwiphondo laseCalifornia. Amaziko aphezulu anje nge-UCLA, iYunivesithi yaseStanford, iYunivesithi yaseCalifornia, iBerkeley, njl.njl apha zizisa abantu abaninzi kunye nezinto ezintsha kurhulumente.
Alithandabuzeki elokuba la maziko abiza imali eninzi kwaye akhuphisana kakhulu kwaye ukuba ubungazi, ngoku uyakwenza oko. Kananjalo, zibiza kakhulu kwaye ziyakhuphisana kubafundi bamanye amazwe, kwaye ukuhlala kurhulumente kubiza kakhulu nokuba ngabafundi basekhaya okanye bamanye amazwe. Nangona kunjalo, izidanga oza kuzifumana apha zibambe udumo lwamanye amazwe.
Kukho indlela yokuba ujoyine kwi-vibrancy yaseCalifornia kwaye ufumane imfundo ngexabiso elingabizi kwaye ukonwabele imfundo esemgangathweni kwaye ufumane isidanga esaziwayo. Ngale ndlela kukuya kwikholeji yasekuhlaleni, apho uya kufumana izakhono, ulwazi, kunye neendlela zokuphumelela ebomini emva kwesikolo.
Abanye abafundi bakhetha iikholeji zoluntu kwaye oku kungenxa yesifundo esisezantsi, ithiyori encinci kunye nokusebenza ngakumbi, kunye nokufumana izakhono onokuthi uzisebenzise kwiimeko zobomi bokwenyani. Umzekelo, ukuba uyabuthanda ubuchwephesha obunjengokuchwela, umbane wombane, umntu osebenza ngemibhobho yamanzi, ikhowudi yezonyango, umncedisi kagqirha, njl.njl.
Okokuqala, iiyunivesithi kunye neekholeji zeminyaka emine aziboneleli ngeenkqubo zolu hlobo, ziikholeji zasekuhlaleni kuphela ezenza kwaye ezi kholeji zibonelela abafundi ngemfundo esemgangathweni enokubenza ukuba baqale ukusebenza kwangoko emva kokuba begqibile inkqubo.
Okwesibini, ngokungafaniyo neeyunivesithi kunye neekholeji zeminyaka emine, kuthatha iminyaka emibini ukugqibezela inkqubo yesidanga kwikholeji yoluntu kwaye ufumane isidanga sokudibana, isatifikethi, idiploma, okanye isiqinisekiso esifunekayo esamkelwa kwaye samkelwe ngabaqeshi kwihlabathi liphela. Ukongeza, ikhredithi evela kwinkqubo yakho inokudluliselwa eyunivesithi okanye ikholeji yeminyaka emine.
Okokugqibela, lixesha eliphezulu lokuba singene kwesona sihloko siphambili kwaye ngaphandle kokuqhubeka, masingene kuso. Unokufuna ukusebenzisa itafile yemixholo engezantsi ukuhamba ngokulula kwinqaku.
1 Yintoni iKholeji yoLuntu eCarlifonia?
2 Ngubani onokujoyina iKholeji yoLuntu eCalifornia?
3 Zithini iimfuno zokujoyina ikholeji yoluntu eCalifornia?
4 Iikholeji zoLuntu eziGqibeleleyo eCarlifonia
4.1 1. IKholeji yase-Irvine Valley
4.2 2. ILake Tahoe Community College
4.3 3. ISanta Barbara City College
4.4 4. Ikholeji yaseDe Anza
4.5 5. IPasadena City College
4.6 6. Ikholeji yaseMoorpark
4.7 7. I-Imperial Valley College
4.8 8. Ikholeji yaseHartnell
4.9 9. Ikholeji yaseSantiago Canyon
4.10 10. Ikholeji yaseMt San Antonio (Mt SAC)
4.11 11. ​​Ikholeji yaseLas Positas
4.12 12. Ikholeji yaseDiablo Valley
4.13 13. IYunivesithi yaseWest Valley
5 Ii-FAQ kwiiKholeji zoLuntu eziBalaseleyo eCarlifonia
Yintoni iKholeji yoLuntu eCarlifonia?
Iikholeji zasekuhlaleni eCalifornia yinkqubo yemfundo yamabanga aphakamileyo kwisikolo saseCalifornia efuna iminyaka emibini ukuba igqitywe kwaye inike isidanga sokudibana, idiploma, okanye isatifikethi ngokuxhomekeke ekubeni ufunde ixesha elingakanani ngale nkqubo. Kukho iikholeji zoluntu eziqinisekisiweyo ze-116 eCarlifonia
Ngubani onokujoyina iKholeji yoLuntu eCalifornia?
Umhlali waseCalifornia angazibandakanya, oko kukuthi, afumane ukwamkelwa nakweyiphi na iikholeji zasekuhlaleni eCalifornia ukuba banediploma yamabanga aphakamileyo okanye elingana nayo kwaye banelise ezinye ukufaneleka kunye neemfuno zokwamkelwa.
Abangengabo abahlali, ababandakanya abafundi bamanye amazwe, banokwamkelwa ukuba nabo banesidiploma samabanga aphakamileyo okanye abalinganayo, ngaphezulu kweminyaka yobudala eyi-18, abathi ekugwebeni ibhodi yesikolo bakwazi ukwenza inzuzo kulomyalelo ufundiswayo.
Ngaphaya koko, iikholeji zasekuhlaleni eCalifornia zinokwamkela abantwana abangenazo iidiploma zamabanga aphakamileyo okanye ezilinganayo nezifundo zeentengo zemboleko njengabafundi abasisigxina okanye abakhethekileyo abasisigxina.
Zithini iimfuno zokujoyina ikholeji yoluntu eCalifornia?
Izidingo zokufaka isicelo sokwamkelwa kwenye yeekholeji zabahlali eCarlifonia kulula, kufuneka nje ube nediploma yamabanga aphakamileyo okanye efanayo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Yiyo yonke imfuno oyifunayo ukuze ujoyine ikholeji yoluntu eCalifornia.
Iikholeji zoLuntu eziGqibeleleyo eCarlifonia
Nazi iikholeji zoluntu ezilungileyo eCarlifonia, amakhonkco kwiziko ngalinye anikezelwe ukuba nje unokufumana naziphi na izikolo ezinomdla, unokucofa kwikhonkco ukuze ufunde okungakumbi malunga nesikolo kwaye uqale ukufaka isicelo.
Kukho iikholeji zoluntu ezivunyiweyo ze-116 eCarlifonia kodwa kuphela ze-13 zibalaseleyo ezikhethiweyo kwaye kwaxoxwa ngazo kweli nqaku.
College Tahoe Community College
Ikholeji yaseSanta Barbara City
College of Deza
KwiKholeji yeSixeko sasePasadena
I-Imperi Valley College
College of Santiago Canyon
Ikholeji yaseMt San Antonio (Mt SAC)
Ikholeji yaseLas Positas
KwiKholeji yaseDiablo Valley
Ikholeji yaseIrvine Valley edla ngokubhekiswa kwabaqalayo njenge-IVC yasekwa ngonyaka we-1985 njengekholeji yoluntu yoluntu e-Irvine, eCalifornia, kunye nenqanaba kuluhlu lweekholeji zoluntu ezilungileyo eCarlifonia. Ukuhlala kumhlaba ongaphezulu kwehektare ezingama-60 zomhlaba, i-IVC inamaqonga ngezixhobo ezinqamlezileyo kunye nezixhobo, abasebenzi abazinikeleyo, kunye necandelo elibalaseleyo elinikezelwe ekuxhobiseni abafundi ngolwazi olufunekayo ukuze baphumelele kwimisebenzi yabo.
Izikolo ezili-11 zemfundo e-Irvine Valley College zibonelela ngesidanga esidibeneyo ngaphezulu kwe-70 majors kwishishini, kubugcisa, uyilo oludibeneyo, kunye nakwisayensi yezentlalo. Kukwakho neenkqubo zomsebenzi kunye nezobuchwephesha ezingama-60 ezibonelela ngesatifikethi kwabo bafuna ukuqeqeshelwa umsebenzi othile okanye ukuthatha izifundo zokuphuhla kwabo.
Ikholeji ngokulinganayo inomgama (kwi-Intanethi) inkqubo yemfundo evumela abafundi ukuba bathathe kwaye bagqibe iiklasi kwi-intanethi. I-IVC inabafundi abamalunga ne-15,000 kubandakanya abafundi abangama-550 abavela ngaphandle korhulumente nelizwe, ke, bayabamkela abafundi bamanye amazwe. Iindleko zokufunda apha yi- $ 14,415 ukuya kwi- $ 20,577.
2. ILake Tahoe Community College
ILake Tahoe Community College yasekwa ngo1975 ukulungiselela abahlali boMzantsi Lake Tahoe eCalifornia. Ikholeji inika umlingane kwizidanga zobugcisa kunye nezesayensi kuluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo ezingaphezulu kwama-40 kwaye zibandakanya ishishini, isayensi yezentlalo, kunye nesayensi yendalo onokuthi udlulisele ikhredithi kwiziko leminyaka eliyikhethileyo.
Ukuba unomdla wokufumana isatifikethi okanye idiploma kwikhondo lomsebenzi okanye lobugcisa i-LTTC ikwabonelela ngaphezulu kweenkqubo zesatifikethi ezingama-20 zabafundi abanomdla abanokukhetha kuzo. Abafundi bamanye amazwe ngoku bamkelwe kuso nasiphi na isiqinisekiso kunye neenkqubo zesidanga. Imali yokufunda yabangengabo abahlali baseCalifornia, abafundi abangaphandle, kunye nabafundi bamazwe aphesheya iyi- $ 205 ngeyunithi ngelixa ukufundiswa kususwa kubahlali baseCalifornia nabo abaya kwisikolo samabanga aphakamileyo eCalifornia.
3. ISanta Barbara City College
Ikholeji yaseSanta Barbara City yenye yeekholeji zoluntu ezilungileyo eCarlifonia, yasekwa e1909 yayenza enye yeekholeji zoluntu ezindala eCarlifonia. Ikholeji ineekhampasi ezintathu ezikwiiyure ezimbalwa ukuqhuba ngaphandle komnye nomnye. Eyona khampasi iphambili ikwiCliff Drayivu, iSchott Campus ikwiPadre Street, kwaye eyesithathu ikwi, Ikhampasi yaseWake eseTurnpike Road, zonke eSanta Barbara.
Ikholeji ibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zokuthenga ngetyala eziyilelwe ukulingana uhlobo lwemfundo onokufunwa ngumfundi. Kukho indibaniselwano kwezobuGcisa kuTshintshiselwano (AA-T) isidanga kunye noMdibaniso weSayensi yokuGqithisela (AS-T) isidanga, le yeyabafundi abafuna ukugqithisela ikhredithi eyunivesithi okanye ikholeji yeminyaka emine.
Ke kukwakho nesiNxulumanisi esiqhelekileyo kubuGcisa (i-AA) kunye neNkqubo yokuNxibelelana neSayensi (AS) enika uluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo ezisusela kunxibelelwano nakwezobugcisa benkululeko kubuntu nakwisayensi yendalo. Ikholeji ikwabonelela ngesiQinisekiso sePhumeleleyo seBhaso, iBhaso lokuFunda ngeZakhono, kunye neBhaso leSebe. Ukufunda kwi-Intanethi nako kuyafumaneka.
4. KwiKholeji yaseDe Anza
UDe Anza yenye yeekholeji zoluntu ezibalaseleyo eCarlifonia, ikholeji yoluntu ikwiCapeertino kwaye yasekwa ngonyaka we-1967. Ngaphezulu kwabafundi abangama-21,500 ababhalise kwesi sikolo besukela izidanga zokudibana kunye nezatifikethi zomsebenzi kubuchwephesha bezithuthi, ulawulo lwamandla, kunye nokwakha isayensi, Ingcali yesayensi yezilwanyana zasendle, njl.njl.
Kwikholeji yaseDe Anza ungafumana isidanga okanye isatifikethi, ugqithisele eyunivesithi, okanye ufumane uqeqesho lomsebenzi. Isikolo siphezulu ekudluliseni, samkela abafundi bamanye amazwe, kwaye sinikezela ngamathuba ezemali kubo bonke abantu. Iindleko zemfundo apha zisusela kwi- $ 12,300 ukuya kwi- $ 19,302.
5. IPasadena City College
Le yikholeji yoluntu yoluntu ePasadena, eCalifornia, e-USA esekwe kwi-1924 ngobhaliso lwangoku malunga ne-29,200 yabafundi abalandela izidanga, iinkqubo zokudlulisa, kunye nezatifikethi ezingaphezulu kweenkqubo ze-200. Ngale nkqubo yezifundo, ikholeji ibonelela ngomgangatho ophezulu wokufunda, wokuyila, kunye nokufunda okunamandla okukhuthaza impumelelo yomfundi.
Ikholeji yeSixeko sasePasadena ikwamkelwa ngamaqonga amanqanaba aphezulu njengenye yeekholeji zoluntu ezilungileyo eCalifornia. Ngaphaya koko, ikholeji inekhampasi ephambili, ikhampasi yesathelayithi, iziko lemfundo yoluntu, kunye neziko lokukhulisa abantwana elinikezelwe kuluntu lwasePasadena. Ngaphezulu kwabafundi be-1,200 abavela kwihlabathi liphela ababhalise apha, ikholeji ivula iingcango zayo kubafundi bamanye amazwe.
6. Ikholeji yaseMoorpark
Ikholeji yaseMoorpark ibekwa phakathi kweekholeji eziphambili eCarlifonia kwaye inabafundi abamalunga ne-12,000 ababhalise kwiinkqubo ezahlukeneyo zesidanga kunye nesatifikethi sobugcisa abanokuthi bathathe isigqibo sokuba basigqibe kwikhampasi, kwi-Intanethi, okanye kwisimo se-hybridi. Iindlela ezahlukeneyo zokhetho zenzelwe ukuvumela abafundi ukuba bakhethe uhlobo lokufunda olunokuguquguquka olulungele bona ngelixa behlangabezana neenjongo zabo zemfundo.
Ikholeji ibekwe eLos Angeles, ukuhlala apha ngokuqinisekileyo kuya kubiza imali eninzi, kwaye kubonelela abafundi ngemfundo eyaneleyo abayifunayo ukuze bakwazi ukufikelela kwiinjongo zabo zemfundo kunye nezobugcisa. Ukudibana kunye nokudlulisela ukhetho kunye nezatifikethi zibonelelwa kumasebe amaninzi esikolo njengolwazi, impilo, kunye nokuba sempilweni, ishishini, accounting, i-biotechnology, njl.
7. I-Imperial Valley College
NjengaseAsia njengoko igama lekholeji linokubonakala ngathi, yikholeji yoluntu yoluntu eCarlifonia, e-USA, kwaye yenye yezona zinto zibalaseleyo kuloo nto. Ngokungafaniyo neekholeji ezinabantu abaninzi ngaphezulu kwabafundi abangaphaya kwama-20,000, le kholeji inabafundi abangaphantsi kwesi-7,000 kuphela kwaye isizathu sale mali iphantsi yabafundi sinokuba ngenxa yesidanga se-50 kunye neenkqubo zesatifikethi esibonelelayo.
Iikholeji ezingentla zibonelela malunga needigri ezingama-200 kunye neenkqubo zesatifikethi kwaye ngenxa yoluhlu olubanzi lweenkqubo, kuqhelekile ukuba abafundi abaninzi bafake izicelo apho ngelixa ezineenkqubo ezincinci ziya kuba nenani elincinci labafundi. Nangona kunjalo, iinkqubo ezithandwayo ezinje ngezolimo, ishishini, kunye ne-STEM zinikezelwa apha.
Ukongeza, ikholeji ibonelela ngamathuba ezifundo zabafundi abafuna ukutshintshela eyunivesithi okanye ikholeji yeminyaka emine. I-IVC-ebekwe empuma yeSan Diego-ibonelela ekhampasi kunye nokukhetha izinto eziguquguqukayo ezikwi-intanethi kwaye ivumela abafundi abavela kubo bonke kunye nakwabanye ukuba bacime umlilo, kunye neenkqubo zoqeqesho zoluleko.
8. Ikholeji yaseHartnell
Eyasungulwa ngo-1920 kwaye ihlala eSalinas, eCalifornia, iKholeji yaseHartnell inikezelwe ekwandiseni amathuba emfundo kubantu abangagcinwanga kakuhle. Liziko laseSpanishi elisebenza emva kwesekondari elinikezela izidanga kunye neziqinisekiso zobungcali kwiinkqubo zemfundo ezinje nge-STEM, ubuhlengikazi, isayensi yezempilo, ubugcisa obuhle kunye nokwenza ubugcisa, kwaye uninzi oluninzi olunokugqitywa ngeendlela zokufunda kwi-Intanethi.
Ikholeji yaseHartnell yamkelwe phakathi kweekholeji eziphambili eCarlifonia kwaye inesidanga sabafundi abamalunga ne-17,000 nto leyo ethetha ukuba inezidanga ezahlukeneyo kunye neenkqubo zesatifikethi. Abafundi bamanye amazwe abafuna ukufumana nokuba ngumhlobo wobugcisa okanye unxulumana nesidanga sesayensi okanye isatifikethi sobungcali nakweyiphi na iikholeji zoluntu ezilungileyo eCarlifonia zamkelwe ukuba zifake isicelo apha.
9. Ikholeji yaseSantiago Canyon
Ngaba unomdla wokungena emsebenzini, ukuphucula isakhono sakho, ukugqithisela kwiziko leminyaka emine, ukunyuka kwinqanaba lezemfundo, okanye ube ngumsebenzi oqeqeshiweyo? Emva koko iKholeji yaseSantiago Canyon inokuba yindawo efanelekileyo kuwe. Ikholeji ibonelela ngezidanga ezinxulumene nobugcisa kunye nesayensi kunye nezatifikethi zobungcali kuluhlu olubanzi lwamacandelo emfundo eyilelwe ukuhlangabezana nazo naziphi na iimfuno ezingasentla.
Ezinye zeenkqubo zemfundo zibandakanya ezoqoqosho, ezokonga, umculo, i-cosmetology, ishishini, i-astronomy, ikhowudi yezonyango, i-accounting, njl.njl kwaye unokukhetha ukufunda kwi-Intanethi ukuba unoxanduva.
10. Ikholeji yaseMt San Antonio (Mt SAC)
I-Mt SAC, ebekwe kwisixeko saseWalnut, yenye yeekholeji zoluntu ezilungileyo eCalifornia ezibonelela ngaphezulu kwe-260 yeenkqubo ezahlukeneyo zoqeqesho kwezobugcisa kunye neeklasi ezingaphezu kwe-3,000 ezikwi-Intanethi. Inkqubo yokudibana kunye nesatifikethi apha kubandakanya iingcebiso malunga neziyobisi, itekhnoloji yesayensi yaselebhu, umlilo kunye netekhnoloji, itekhnoloji yeekhompyuter, kunye nokunye.
Ungadlulisela kwiziko leminyaka emine ekupheleni kwenkqubo yakho ukukunceda ugcine iindleko kwaye ufumane ngokukhawuleza isidanga sakho se-bachelor. Ukuba ufuna ukungena kubasebenzi endaweni yoko izakhono kunye nolwazi oluza kuzuza kunye nesidanga sakho okanye isatifikethi siya kukwenza ukhetho oluphezulu kubaqeshi.
11. ​​Ikholeji yaseLas Positas
Ngaba indlela yokufunda ekwi-Intanethi okanye yokufunda ubuso ngobuso iyahambelana nawe? Nokuba yeyiphi na, iKholeji yaseLas Positas ibonelela abafundi abafuna ukulandela kunye nokufumana isidanga okanye isiqinisekiso sobungcali nangaliphi na ixesha kwimeko apho bafumana kufanelekile. Iinkqubo ezibonelelwa kweli ziko ziyilelwe ukukufumanela umsebenzi ohlawula kakhulu okanye ukugqithisela kwiziko leminyaka emine.
Ikholeji yaseLas Positas ikwiLivermore kwaye yenye yeekholeji zoluntu ezilungileyo eCalifornia, ibhalise abafundi abamalunga ne-6,500 ngonyaka kwaye ibonelela ngeenkonzo zabafundi ezinje ngoncedo lwezezimali kunye neenkonzo zempilo yengqondo.
12. Ikholeji yaseDiablo Valley
Ikhaya labafundi abahlukeneyo babafundi, kubandakanya abaphumelele kwisikolo esiphakamileyo, abafundi abadlulisayo, kunye nabafundi abasafunda ubomi bonke, iDiablo Valley College yenye yeekholeji zoluntu ezibalaseleyo eCalifornia. Ineekhampasi ePleasant Hill naseSan Ramon enikezela abafundi izidanga ezingaphezu kwama-80 kunye neenkqubo zesatifikethi.
Iiklasi zinikezelwa ngeefomathi zemveli kunye nezikwi-intanethi kodwa apha kule kholeji, unokugqibezela idigri enxulumene ne-100% kwi-Intanethi kwiindawo ezinje ngolawulo lobulungisa, ishishini, kunye nembali.
13. IYunivesithi yaseWest Valley
Kuluhlu lwethu lokugqibela lweekholeji zoluntu ezilungileyo kakhulu eCarlifonia kwiWest Valley College. Ime eSaratoga, eSan Francisco Bay, enabafundi abaphantsi kwabafundi be-2,510. Kukho ngaphezulu kwe-120 isidanga sokudibana, isatifikethi, kunye neenkqubo zokudlulisa ezikhethiweyo onokukhetha kuzo. Ezinye zeenkqubo zibandakanya ukubalwa kwemali, ukuthengisa, ubunjineli, abezomthetho, ingcali yomdaniso, kunye nokunye.
Ezi ziinkcukacha zeekholeji zoluntu ezili-13 ezilungileyo eCalifornia, jonga ulwazi oluthe kratya kuyo nayiphi na iikholeji ebonisa umdla wakho ngokulandela amakhonkco ahlinzekelweyo.
Ii-FAQ kwiiKholeji zoLuntu eziBalaseleyo eCarlifonia
Yeyiphi inombolo yekholeji yoluntu eyi-1 eCarlifonia?
Inombolo 1 okanye ikholeji yoluntu ephezulu eCalifornia yiIrvine Valley College.
Yeyiphi ikholeji yoluntu yaseCalifornia enelona zinga liphezulu lokuthweswa izidanga kunye nokudlulisa amaxabiso?
Ikholeji yaseDiablo Valley yikholeji yaseCalifornia enelona zinga liphezulu lokudlulisa kunye nokudlulisa amanqanaba.
Yeyiphi eyona kholeji yoluntu ilungileyo yokutshintshela kwi-UCLA?
Ngaphezulu kweekholeji zoluntu zaseCalifornia zithumela abafundi kwi-UCLA kodwa iKholeji yaseSanta Monica yeyona ilungileyo yokwenza oku, ithumela malunga ne-100 ukuya kwi-400 yabafundi ngonyaka kwi-UCLA.
Ngaba i-3.7 GPA ilungile kwikholeji yasekuhlaleni eCalifornia?
Umndilili we-GPA kwiikholeji zoluntu eCalifornia yi-3.0 ke, ukuba ne-3.7 GPA kubaluleke kakhulu kwaye kulungile kwikholeji yoluntu eCarlifonia.
Ungaba njani nguNjingalwazi weKholeji yoLuntu
I-10 yeeKholeji zoLuntu eziBalaseleyo eCanada zaBafundi beZizwe ngezizwe
Iikholeji zoLuntu ezingama-20 ezitshiphu eMelika zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Ujoyine njani iKholeji yasekuHlaleni yoMkhosi woMoya, e-US
Iikholeji ezili-13 eziHlangayo iimfuno zeMathematika
Iingcebiso zokonga imali kwiindleko zekholeji
Iikholeji ezili-10 eziphezulu ezingenayo imali yokufaka isicelo eTexas | Faka isicelo ngoku
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Funda iSakhono kwi-Intanethi izifundo zekhompyutha Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship funda kwi-intanethi
ezona kholeji zoluntu zibalaseleyo eCarlifonia
Post Previous:I-35 + zeZikolo eziBalaseleyo zeAutism ePhambili yokuSebenza
Okulandelayo Post:IZIKOLO EZI-TOP 3 ZAMAZINYO EFLORIDA ZENZA UMSEBENZI WAMAZINYO